बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? जन्नुहोस ! कुन बेला नुहाउदा हुन्छ फाइदा - Samachar PatiSamachar Pati
बिहान नुहाउनुहुन्छ कि बेलुकी ? यो तपाईंको व्यक्तिगत रुचिको विषय हो । यद्यपि, प्रायः मानिस बिहान नुहाउन मन पराउँछन् । जुन स्वस्थ जीवनका लागि फाइदाजनक पनि हो । तर, तपाईंलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि बिहानभन्दा बेलुकी नुहाउनु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यी हुन् बेलुकी नुहाउँदाका फाइदा
दिनभर काम गर्दा स्वाभाविक रूपमा मानिसले थकाइको अनुभूति गर्छ । थकाइले मानिसको मुड पनि खराब गर्छ । अनि स–साना कुरामा पनि रिस उठ्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले थकाइलाई टाढा राख्ने गतिविधि गर्न आवश्यक हुन्छ । थकाइबाट मुक्त हुँदा तपाईंको मुड पनि ठीक ठाउँमा आउँछ र तपाईंको स्फूर्ति जाग्न थाल्छ । थकाइ र प्रदूषणबाट मुक्त हुन रातमा नुहाएर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
बोसो लागेर तनावमा हुनुहुन्छ, शरीरमा बोसो कम गर्न यस्ता खाना खानु पर्छ
स्वास्थ्य शिविरमा ३५० को निःशुल्क जाँच ! के के जाँच भयो त निशुल्क रुपमा हेर्नुहोस
जान्नुहोस् ! कागतीका बेफाइदा